Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qatar Airways iyo RwandAir oo Shaaciyay Heshiiska Khadka
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Rwanda • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Afrika waa suuq aad muhiim ugu ah Qatar Airways iskaashigan ugu dambeeyay wuxuu gacan ka geysan doonaa taageeridda dib u soo celinta safarada cirka ee caalamiga ah wuxuuna bixinayaa isku xirnaan aan kala sooc lahayn oo ka imaanaysa dhowr meelood oo cusub oo Afrikaan ah.
Iskaashigu wuxuu xoojin doonaa shabakadda caalamiga ah ee Qatar Airways.
Helitaanka Qatar Airways ee goobaha Afrika ayaa sii kordheysa.
Heshiiska ayaa dhexgeli doona faa'iidooyinka barnaamijyada daacadnimada Qatar Airways iyo RwandAir.
Qatar Airways rakaabku waxay awoodi doonaan inay sahamiyaan xitaa in ka badan Afrika ka dib iskaashigooda cusub ee ay la leeyihiin side calanka Rwanda, RwandAir iyaga oo maraya xarumahooda Doha iyo Kigali.
Iyada oo qayb ka ah iskaashiga istiraatiijiyadeed, heshiiska khadka tooska ah ee ballaaran wuxuu macaamiisha siin doonaa marin u helka shabakadaha labada shirkadood, isagoo siinaya waayo -aragnimo safar oo aan kala go 'lahayn iyo adeegga macaamiisha oo la wanaajiyey oo ay ku jiraan barnaamijyada wargeysyada soo noqnoqda.
Macaamiishu waxay dooran karaan oo ka dooran karaan in ka badan 160 goobood oo ku yaal shabakadaha isku -dhafka ah ee labada shirkadood, kuwaas oo si fiican ugu xiran xaruntooda guryo ee Doha iyo Kigali.
Wadashaqayntii ugu dambaysay waxay ku soo beegantay cidhibtirka ku dhawaaqista iskaashiga daacadnimo ee dhawaanahan, ee bixinta RwandAir Riyada Miles iyo Qatar Airways Xubnaha daacadnimada Naadiga Mudnaanta, helitaanka midba midka kale meelaha ay ku sugan yihiin iyagoo fursad u leh inay 'kasbadaan oo gubaan' dhibcaha dhammaan shabakadaha waddada is -dhaafsiga ah.
Mudane Akbar Al-Baker, Madaxa Fulinta Kooxda Qatar Airways ayaa yiri: “Iskaashigani wuxuu meesha ka saarayaa ballanqaadkayagii ahaa inaan siinno dadka safarka ah xulashada meelaha ugu ballaadhan, iyadoo la siinayo khibrad safar oo aan kala go’ lahayn, taas oo ah hadafka Qatar Airways iyo RwandAir.
“Afrika waxay noo tahay suuq aad muhiim ugu ah iskaashigan ugu dambeeyay wuxuu gacan ka geysan doonaa taageeridda dib u soo kabashada socdaalka hawada caalamiga ah wuxuuna bixinayaa isku xirnaan aan kala sooc lahayn iyo dhowr meelood oo cusub oo Afrikaan ah.”
Yvonne Makolo, oo ah maamulaha guud ee RwandAir, ayaa yiri: “Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inaan u furno adduunka intiisa badan macaamiisheena heshiiska cusub ee khadka dhexe ee Qatar Airways.
Dhulka Caasimadda Australia wuxuu Galayaa Qufulka COVID oo Buuxda
Goobaha Sandals ee Hadiyadaha Ciyaaraha Olombikada Kariibiyaanka ...
Guinea ayaa ka baxday Midowga Afrika kadib afgembigii militariga
Jarmalka wuxuu soo dhaweynayaa safrayaasha Mareykanka ee soo laabtay Axadan ...
Dagaalkii Difaaca Dadka ee Myanmar: Rasmi ...
Diyaaradda Hawaiian waxay duulimaadyadii dib ugu soo celisay Tahiti
ICAO ayaa iftiimisay soo jeedinta Qadar ee ah in la xakameeyo ...
Dalxiiska Barbados wuxuu ku soo laabanayaa diiwaangelintii bishii Luulyo
Adkaysiga Dalxiiska Caalamiga & Maareynta Dhibaatada ...
Maamulayaasha Bariga Dhexe: Hogaaminta shirkad diyaaradeed sanadka 2021
Turkiga ayaa mamnuucay duulimaadyada tooska ah ee ka yimaada Bangladesh, Brazil ...
Nederland waxay dib u soo celisay xayiraadihii COVID-19 iyadoo cusub ...
Eswatini wuxuu ahaa nin nabdoon kadib markii boqortooyada ay soo martay rabshad ...
Seychelles waxay soo dhaweyn doontaa Maraakiibta Maraakiibta ee Dib -u -noqoshada bisha Nofembar ...
Maaskaro qasab ah oo ku soo noqonaya London Underground
Imtixaannada aan culeyska lahayn ee COVID-19 ee loogu talagalay Dalxiisayaasha Booqanaya ...
Xayiraadaha ka qaadista safarka caalamiga ah ee Mareykanka ...
COVID-19 Delta Variant oo ku sii fideysa adduunka oo dhan
Madaarka Moscow Sheremetyevo wuxuu soo saaray Xal Cusub oo loogu ...
Shidaalka Duulista Joogtada ah ee hadda ay heli karaan shirkadaha diyaaradaha ...
Safarka Thailand? U diyaar garow inaad qaadato 3 COVID-19 ...
Garoomada diyaaradaha ee Bangkok si loogu adeego Isbitaalada COVID-19